Ulwazi lwe-Red Heeler Inja Yokuzala: Isimo, Ukubukeka & Abafuyi - Izinhlobo
Ulwazi lwe-Red Heeler Inja Yokuzala: Isimo, Ukubukeka & Abafuyi
URed Heeler, mhlawumbe owaziwa kangcono njenge-Australian Cattle Dog, uyinja yokwalusa evela eNew South Wales, e-Australia.
Igama labo lesidlaliso elithi 'Heeler' livela endleleni yabo eyehlukile yokwelusa izinkomo ngokuncinza izithende zabo.
TO inja yokwalusa enhle kakhulu , le midlwane e-agile iyinja ehlukile e-United States, kepha, ukuthandwa kwayo kuhlale kukhula futhi kubalwa # 56 emhlabeni jikelele yezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu .
Yini okufanele uyazi ngalenja yezinkomo? Bavelaphi? Badinga ukuvivinya umzimba okungakanani? Kulula kangakanani ukuqeqesha? Ungayithenga kuphi imidlwane ehlanzekile?
Lo mhlahlandlela wokugcina uzokunikeza zonke izimpendulo ozidingayo, ufunde kuzo ukuthola okuningi.
Inja Ebomvu Heed Info
Usayizi Abesilisa 19-20 ″ / Abesifazane 17-19 ″
Isisindo 33 kuye ku-45lb
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-11 - 15
Uhlobo Lokuzala Inja Eyalusayo
Inhloso Izinkomo Ukwalusa
Ifanele i- Abadala Abasebenzayo noma Abalimi
Ukuhluka Kwemibala Okumnyama nokumhlophe Okunikeza Ukubukeka Okubomvu
Isimo I-Clever, i-Brave, i-Agile, i-Smart, i-Alert
Amanye Amagama Inja Yezinkomo Zase-Australia, Inja Yezinkomo, iQueensland Heeler, Inja Yezinkomo Zase-Australia
Inja ye-Red Heeler
I-Red Heeler Puppy
Isimo Somlilo Esibomvu Esibomvu
Ingabe Lena Yinja Yomndeni Efanele?
Ukunakekela I-Heeler Ebomvu (Ukondla, Ukuzivocavoca Nokuqeqesha)
Izidingo Zokudla Nokudla
Umbala we-Red Heeler, Ukubukeka, Ijazi nokuzilungisa
Ukulungisa Inja Yezinkomo
I-Red Heeler yaqala ukuvela ngekhulu le-19 ngenkathi uThomas Hall (umlimi wezinkomo waseNew South Wales, e-Australia) efuya izinja zakhe ezazelusa ngamadoski asethambile ukudala ama-Heelers okuqala .
Uqambe le nja ngokuthi iHeleers.
Lapho eshona, lo mhlobo wanyamalala kancane kancane, wangabe usatholakala ukuze uthengwe. Kodwa-ke, umlandeli walolu hlobo, uRobert Kaleski, wangenela wabasindisa, ebhala indinganiso yokuqala eyaziwayo.
Akwaziwa ukuthi izinkomo zase-Australia zafika nini okokuqala e-United States, kodwa, kucatshangelwa ukuthi kuzoba maphakathi nekhulu lama-20.
I- IRed Heeler yaziwa amakilabhu amakhulu amakhulu ekennel , kusukela ngo-1893 i-Heeler ifakiwe ekuhlelweni kokwalusa kwe-American Kennel Club.
Lezi zinja zisamile esetshenziswa njengezinja ezisebenzayo ezifundeni zezinkomo emhlabeni jikelele; kodwa-ke, zingenza nezilwane ezifuywayo ezinhle kakhulu zomndeni - inqobo nje uma zisetshenziswa kahle.
Abathandi ukuhlala ekhaya ngaphandle kokuzivocavoca umzimba, kunalokho, bayathanda ukusebenza (ungafunda kabanzi ngalokhu esigabeni sethu sokuzivocavoca ngezansi).
Izinja ezibomvu ze-Red Heeler, ezimweni eziningi, zizalwa zimhlophe qwa. Njengenja yaseDalmatia ethola izindawo zayo, lolu hlobo lukhula lubomvu ngokukhula.
Kukhona ukwehluka okukhulu ngentengo yalezi zinja, nge Imidlwane yabomvu iRed Heeler ibiza noma yikuphi phakathi kuka- $ 250 kuya ku- $ 2,500 USD . Umehluko wentengo ususelwa kuzalo lomzali.
Inja yozalo, yinja enabazali bozalo (obuqala ezizukulwaneni ezine noma ngaphezulu) bonke ababhaliswe ngeklabhu yenja.
Ngokwesilinganiso, udoti uzoba nemidlwane ephakathi kuka-5 no-7, kodwa idamu eliphilile lingaba nemidlwane efinyelela kwayisishiyagalolunye kudoti.
Lolu hlobo lwaziwa ukuthi lunezinkinga zokuzala futhi kuningi lokukhulelwa okungelona iqiniso kuleli qembu lohlobo.
Ngezansi ishadi lokukhula elilinganiselwe le-puppy yakho, amakhilogremu ambalwa ohlangothini akusona isizathu esikhulu sokukhathazeka, noma kunjalo, uma inja yakho iphambuka kakhulu kubude noma kusisindo esiphakanyisiwe; ukuvakashela kudokotela wezilwane kungaba umqondo omuhle.
Izinyanga eziyi-6 14 16 14 17
Izinyanga eziyi-12 16 27 16 25
Izinyanga eziyi-18 19 35 18 31
Inja Yenkomo Yase-Australia yaziwa ngokuzimela nokuzihlukanisa, ayisiyena umlandeli omkhulu wokugaxa kusofa.
Ngaphandle kwalokhu, yizinja eziqotho ngendlela emangalisayo , okwaziwa ngokuvikela umhlambi wabo ngendlela emangalisayo, okubandakanya nomndeni wabo.
Isimo sabo sokuqapha ngokwemvelo kubenza izinja eziqaphile kakhulu , ngoba bangabi nabungani kakhulu nabantu abangabazi. Ngaphandle kokukuxwayisa kumuntu ongamazi endaweni yakho ngamagxolo ambalwa aphansi, abakwaRed Heelers akuwona ama-barker amakhulu.
AbakwaRed Heelers baziwa njengezinja ezilimaza ngokwemvelo, ezinokuziphatha okuningi okungathandeki okubandakanya ukukhonkotha, ukuhlafuna, ukujaha, ukumba nokuncipha ezithendeni.
Lezi zindlela zokuziphatha zingaba umphumela wokungaqiniseki noma ukubhoreka, ngakho-ke qiniseka ukuthi uyayivivinya inja yakho, ngokomzimba nangokwengqondo.
Lapho benesithukuthezi, bangazama “ukuzwa” amalungu omndeni, ikakhulukazi izingane.
Lokhu kuhlanganisa ukunqampula abantu izithende nokubasukela ngendlu. Lokhu kuziphatha okungathandeki kungamiswa ngokuqeqeshwa. Kodwa-ke, uHeeler udinga umsebenzi, bayinja esebenzayo, ngakho-ke akufanele ulindele ukuthi babe yinja yomndeni yokuhlala ekhaya; kunezinhlobo eziningi ezinhle zomndeni .
Lezi zinja zenza kangcono uma zihlala nezingane ezindala njengoba zinomkhuba omubi wokwelusa izingane ezincane, zizithende ezithendeni zazo.
Ukuqeqeshwa kwenja okuqinisa kahle kuzohamba ibanga elide nale nja, ngaphesheya kwalokho, akudingi uthando oluningi.
Ngenxa yemvelo yabo esebenzayo, izinja zeRed Heeler azifanele abanikazi abangasebenzi.
Badinga umbuso oqinile wokuzivocavoca ukuze ubakhuthaze emqondweni nasemzimbeni, inja yezinkomo kufanele futhi ikwazi ukufinyelela engadini yakho (uma indala ngokwanele) ukuze bakwazi ukuzilolonga.
Amakholori 1,000 kuya ku-1,500
Ukudla okulungile kuzoqukatha amaprotheni angama-18% namafutha ayi-15%.
Lapho eyi-puppy, anezidingo eziphakeme kancane ze-macronutrient; abadinga ama-22% amafutha kanye no-8% wamaprotheni ekudleni kwabo baze babe neminyaka emibili ubudala.
Njengoba bayizinja ezikhuthele kakhulu, zidinga amakholori azungeze ama-30 kuye kwangama-35 ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba .
Lokhu kusho ukuthi uma unenja enesisindo esingu-40lb, leyo nja izodinga phakathi kwama-calories angu-1,200 no-1,400 nsuku zonke. Lokhu kufanele kwehlukaniswe okungenani izidlo ezimbili ukunciphisa ubungozi bokuqunjelwa.
Izinja ezisebenzayo zenza kahle ekudleni okumanzi, lokhu kudla okuphezulu kwamaprotheni kukhuthaza ukukhula okuhle kakhulu kwemisipha kanye nejazi elihle kakhulu.
Qiniseka ukuhlola ilebula ekudleni kwenja yakho, khetha ukudla kwamahhala okusanhlamvu futhi okunenyama enyameni yezithako zayo ezintathu eziphezulu .
Amaminithi Imizuzu engama-90
Le yinja ene-high exercise drive ngakho-ke izodinga ukuzivocavoca umzimba okuningi.
Uma ungabajabulisi ngokuzivocavoca bazoqala ukuzenzela ubumnandi ngendlela yokuziphatha okungathandeki, ukukhonkotha nokuhlafuna okunjalo.
Njengomphumela wale drive iRed Heeler idinga cishe imizuzu engama-90 yokuzivocavoca nsuku zonke .
Lezi zinja zijabula kakhulu lapho zinomsebenzi eziwenzayo, ngakho-ke zama ukuthola inja yakho ezibandakanyeka nemisebenzi efana ne-flyball noma ukuqeqeshwa kokulalela.
Lapho uzivocavoca le nja, kungcono ukuyigcina ibambe isikhathi eside. Lapho beshiyelwe kumadivayisi abo bangagijima amamayela futhi banganyamalala kude ngaphandle kokuthi ukhumbule kahle.
Uma ubheka ukuzivocavoca inja yakho ngenye indlela, lokho akubandakanyi ukuhamba okuningi, zama ukuqeqeshwa kwe-agility.
Ama-Red Heelers ngokwemvelo ayashesha futhi alula ezinyaweni zawo, ngakho-ke lezi zinja zenza izinja zekhono elihle kakhulu.
AbakwaRed Heelers baziwa ngendlela abasabela kahle ngayo ekuqeqeshweni.
Njengezilwane ezifuywayo eziqotho, lezi zinja zihlala zinesifiso sokufunda izinto ezintsha kanye nokuxubha ngamakhono amadala. Ngenxa yefa labo lokusebenza , lezi zinja zingabafundi abasheshayo.
Bathi awukwazi ukufundisa inja endala amaqhinga amasha, kodwa, nge-Australian Cattle Dog lokho akulona iqiniso nje!
Lezi zinja zine-drive emangalisayo yokufunda futhi zihlala zihlakaniphile kuyo yonke iminyaka yazo.
Ukuphendula kahle ekuqiniseni okuhle.
Uzothola ukusebenzisa indlela yokuqeqeshwa njengokuqeqeshwa okuchofoza kuzoba lusizo olukhulu. Umsindo wokuchofoza ungezwakala egumbini lonke futhi umaka ocacile wokuziphatha okufisayo.
Ngendlela efanayo abakwaRed Heelers bakulungele ukushesha, balingane futhi nokulingwa kokulalela .
Amandla abo okufunda nokuthatha ngokushesha ubuqili endizeni kusho ukuthi benza izingqwele zokulalela zokuqala lapho beqeqeshwe kahle.
Le nja yaziwa ngokuthuthukisa isimo esingajwayelekile ngendlela eyisimanga esaziwa njenge-polioencephalomyelopathy eyifa; isimo esithinta isimiso sezinzwa esiyinhloko senja, esidala ukuquleka.
Njengoba igama likhombisa, lesi simo siyifa futhi singahlolwa kubazali, yingakho ifa elihlanzekile libaluleke kakhulu ngalolu hlobo.
Bangakhula futhi nesimo esingajwayelekile eyaziwa ngokuthi i-Oesteochondritis Dissecans .
Lesi yisimo sokuvuvukala esithuthukayo esivela ngenxa yezinkinga ze-cartilage, lapho uqwanga ejoyintini luhlukana khona nethambo. Lokhu kungaba kunoma yimaphi amalunga emzimbeni kepha kuvame ukubonwa ehlombe.
Ngamacala amabi, angalawulwa ngemithi, kepha amacala abucayi kakhulu azodinga ukuhlinzwa ukuze alungiswe.
I-Hip dysplasia yisimo esingajwayelekile kulolu hlobo , ngaphandle uma zisetshenziselwa ukuzalanisa imfuyo.
Lezi zinja zezinkomo zinethuba lokuba nobumpumputhe, noma kunjalo, lokhu kungaba nengxenye yezakhi zofuzo ngakho-ke kungenzeka ukuthi kuhlolwe i-retrophy retrophy eqhubekayo esitokweni sokuzalela.
Inja ebonakala kalula, nezinwele zayo ezinsundu zisatshalaliswa ngokulinganayo ngejazi elimhlophe, kunikeza ukubukeka okubomvu .
Lolu hlobo lunengubo eqondile, eqinile engenhla, nejazi elingaphansi elijiyile eligcwele izinwele .
Lapho bengumdlwane iRed Heelers imhlophe qwa ngezinwele ezinsundu ezikhula ngokuhamba kwesikhathi ukubanikeza isignesha yabo “ebomvu”.
Ubuye uthole iBlue Heelers, enamabhantshi amhlophe ahlotshwe ngwevu, ibanikeze ukubonakala okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Lezi zinja zikhona aziwa ngokuziphatha kwabo okuqinile okuthulile , ichazwe ngumzimba onemisipha, owakheke kahle. Zinezindlebe ezingunxantathu, ubuso be-mesocephalic kanye nomsila ovuthiwe.
Umsila ufakwa ngezikhathi ezithile uma isilwane sisebenza ukusiza ukuvimbela izingozi.
Lezi zinja aziwona ama-shedd unyaka wonke, esikhundleni salokho 'zishaya ngaphandle' minyaka yonke lapho kungena khona ijazi lonyaka okwenza ukuthi elinye ijazi liwe.
Eziduna zishaya ijazi lazo kanye ngonyaka kanti abesifazane bavuthela amajazi abo kabili ngonyaka, imvamisa ngemijikelezo yabo yokushisa.
Lezi zinja azidingi ukusikwa. Bangadinga ukugezwa ngezikhathi ezithile lapho bebelokhu begijima odakeni kodwa ngaphezu kwalokho banengubo elula engenakulinganiswa okufanele bayondle.
Le nja izohlala ithembekile impilo yabo yonke, ingathandi lutho oluzosebenza eceleni kwakho.
Isihluthulelo senjabulo yabo ukuzivocavoca nokusebenza, njengoba iRed Heeler ingenzi kahle ngokuba nesithukuthezi, kudingeka babe ngaphandle basebenze ukuze baneliseke ngempilo.
Uma ubheka ngenja yokwalusa esebenzayo , ke lena inja enkulu.
Kodwa-ke, uma uhlala edolobheni noma ufuna inja yomndeni futhi ungenaso isikhathi sokuzinikela ohlelweni lokuzivocavoca lwale nja, kuyalulekwa ukuthi ukhethe uhlobo oluphansi lwesondlo.
Ingabe unayo i-Red Heeler ekhaya? Ngabe ucabanga ukuthola eyodwa? Ingabe ungumlandeli wohlobo? Sitshele imicabango yakho ngale nja emangalisayo kumazwana.
Umhlahlandlela Wezinja Ezimhlophe: Intengo, Imidlwane, Ukuhluka Kwemibala nokubukeka
Amaqiniso ayi-11 Azokwenza Ufune Ukuba Nomnikazi We-Labradoodle Encane
I-Peekapoo Inja Yazala Ulwazi kanye Nomhlahlandlela Ophelele
Ngabe ama-Pocket Beagles ayangempela futhi ingabe uyayidinga?
I-Boxer Lab Mix: Ukubheka Okuyikho Ama-Boxadors
Izizathu Eziyisishiyagalombili Ezithakazelisayo Kungani Izinja Wag, Zihlafuna, Zisukele Futhi Zinemisila
Ama-Teacup Maltese: Konke Odinga Ukukwazi Ngale Mpuphu Encane
Ulwazi Olukhulu Lokuzala Inja ye-Dane
IMorkie Dogs 101: Okudingeka Ukwazi
I-Mini French Bulldog: Ama-10 Amaqiniso Amahle Ongawazi
ILhasa Apso (Amaqiniso ayi-12 Mayelana Nohlobo Oludala Kunalo Lonke Lokukhona)
izinhlobo zamajazi omalusi waseJalimane
uyini umalusi omncane wase-Australia
umhlanganisi webhu wamabhokisi omnyama nomhlophe
i-golden retriever alaskan husky mix
red retriever enezinwele ezinde ezibomvu